Ndị Rom 6 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
Ndị Rom 6:1-23
6 Ya mere, gịnị ka anyị ga-ekwu? Ànyị ga-anọgide ná mmehie ka obiọma na-erughịrị mmadụ wee dị ukwuu?+ 2 Tụfịakwa! Ebe anyị nwụrụ anwụ n’ebe mmehie dị,+ olee otú anyị ga-esi ka na-adị ndụ na ya?+ 3 Ka ọ̀ bụ unu amaghị na anyị niile bụ́ ndị e mere baptizim ka anyị na Kraịst Jizọs+ dị n’otu bụ ndị e mere baptizim ka anyị nwụọ ụdị ọnwụ ọ nwụrụ?+ 4 Ya mere, e liri anyị na ya+ site na baptizim e mere anyị ka anyị nwụọ ụdị ọnwụ ọ nwụrụ, ka anyị onwe anyị wee na-ebi ndụ ọhụrụ otú ahụ,+ dị nnọọ ka e si ná ndị nwụrụ anwụ kpọlite Kraịst site n’ebube nke Nna ya.+ 5 N’ihi na ọ bụrụ na e mewo ka anyị na ya dị n’otu n’ọdịdị nke ọnwụ ya,+ n’ezie, a ga-emekwa ka anyị na ya dị n’otu n’ọdịdị nke mbilite n’ọnwụ ya;+ 6 n’ihi na anyị maara na a kpọgidere ya na mmadụ ochie anyị n’osisi,+ ka e wee mee ka ahụ́ anyị nke na-emehie emehie ghara ịrụ ọrụ,+ ka anyị wee ghara ịbụkwa ndị ohu nke mmehie.+ 7 N’ihi na a tọhapụwo onye nwụrụ anwụ ná mmehie ya.+ 8 Ọ bụrụkwa na anyị na Kraịst nwụrụ, anyị kwere na anyị na ya ga-adịkwa ndụ.+ 9 N’ihi na anyị maara na ebe ọ bụ na e siwo ná ndị nwụrụ anwụ kpọlite Kraịst,+ ọ dịkwaghị anwụ anwụ;+ ọnwụ abụkwaghị nna ya ukwu. 10 N’ihi na ọnwụ ọ nwụrụ, ọ nwụrụ ya naanị otu ugboro iji wepụ mmehie;+ ma ndụ ọ dị, ọ na-adịrị ya Chineke.+ 11 Otú ahụkwa, unu onwe unu: na-agụnụ onwe unu ná ndị nwụrụ anwụ+ n’ezie n’ebe mmehie dị, ma bụrụ ndị na-adịrị Chineke ndụ+ site n’aka Kraịst Jizọs. 12 Ya mere, unu ekwela ka mmehie na-achị dị ka eze+ n’ahụ́ unu nke pụrụ ịnwụ anwụ ka unu wee na-erubere ọchịchọ ya isi.+ 13 Unu enyefekwala akụkụ ahụ́ unu n’aka mmehie+ ka ọ bụrụ ngwá ọgụ nke ajọ omume,+ kama na-enyefenụ onwe unu n’aka Chineke dị ka ndị si ná ndị nwụrụ anwụ dị ndụ,+ na-enyefekwanụ akụkụ ahụ́ unu n’aka Chineke ka ọ bụrụ ngwá ọgụ+ nke ezi omume. 14 N’ihi na mmehie agaghị abụ nna unu ukwu, ebe unu maara na unu anọghị n’okpuru iwu+ kama n’okpuru obiọma na-erughịrị mmadụ.+ 15 Gịnịzi ga-eme? Ànyị ga-eme mmehie n’ihi na anyị anọghị n’okpuru iwu+ kama n’okpuru obiọma na-erughịrị mmadụ?+ Tụfịakwa! 16 Ọ̀ bụ na unu amaghị na ọ bụrụ na unu na-enyefe onwe unu n’aka onye ọ bụla ka unu bụrụ ndị ohu ya irubere ya isi, unu bụ ndị ohu ya n’ihi na unu na-erubere ya isi,+ ma ọ̀ bụ nke mmehie+ nke na-eweta ọnwụ+ ma ọ̀ bụ nke nrubeisi+ nke na-eweta ezi omume?+ 17 Ma ekele dịrị Chineke na unu bụbu ndị ohu nke mmehie ma unu ghọrọ ndị si n’obi ha na-erube isi n’ụdị ozizi ahụ nke e nyefere unu n’aka.+ 18 Ee, ebe e mere ka unu si ná mmehie pụọ nwere onwe unu,+ unu ghọrọ ndị ohu+ nke ezi omume.+ 19 N’ihi adịghị ike nke anụ ahụ́ unu,+ ana m agwa unu okwu ndị mmadụ na-aghọta: n’ihi na ọbụna dị ka unu nyefere ahụ́+ unu ka ọ bụrụ ohu nke adịghị ọcha+ na mmebi iwu, o wee rụpụta mmebi iwu, nyefeenụ ahụ́ unu otú ahụ ugbu a ka ọ bụrụ ohu nke ezi omume, ka o wee rụpụta ihe dị nsọ.+ 20 N’ihi na mgbe unu bụ ndị ohu nke mmehie,+ unu nweere onwe unu n’ebe ezi omume dị. 21 Gịnịzi bụ mkpụrụ+ ahụ unu nwere n’oge ahụ? Ihe+ ndị na-eme unu ihere ugbu a. N’ihi na ihe ndị ahụ na-eduga n’ọnwụ.+ 22 Otú ọ dị, ebe e mere ka unu si ná mmehie pụọ nwere onwe unu ugbu a, ma ghọọ ndị ohu Chineke,+ mkpụrụ+ unu na-enweta bụ ịdị nsọ, ọ ga-edugakwa ná ndụ ebighị ebi.+ 23 N’ihi na ụgwọ ọrụ nke mmehie na-akwụ bụ ọnwụ,+ ma onyinye+ nke Chineke na-enye bụ ndụ ebighị ebi+ site n’aka Kraịst Jizọs Onyenwe anyị.+